Madaxweyne Denni oo war cusub kasoo saaray xaalada dalka
August 2, 2020 Mahad Jama 12
GALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni oo habeenkii xalay ahayd magaalada Gaalkacyo uga qayb galay munaasibad lagu xusayey sanad guuradii 22-aad ee aasaaskii Puntland ayaa ka hadlay arimo kamid ah xaaladaha amni ee Puntland, mida siyaasadeed ee dalka iyo isbedeladii dhacay Soomaaliya.
Madaxweyne Denni ayaa waxaa uu sheegay in aasaaskii Puntland uu horseed u noqday dowladdnimadii dhaawacu gaadhay 90-kii soo kabashadeedii iyo hiigsiga maanta ee shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu xusay Mr. Denni inay Puntland gaadhay 22-kii sano ee lasoo dhaafay guulo ay kamid yihiin sida amniga, tirakoobka, tayeynta iyo dibu habeynta ciidamada, hirgelinta nidaamka dimuqraadiyada, nabadaynta iyo isbedelka tayeyn iyo tashiil ee maaliyadda Puntland.
Saciid Denni oo ka hadlayey xaalada siyaasadeed ee Soomalaiya ayaa ka digay hab dhaqanka sharci jebinta ah oo ay u dambaysay gollaha adeega ee Garsoorka oo dhismihiisa loo maray sifo sharci ah sida uu sheegay taas oo aysan cidna lagala tashan xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan kasoo horjeestay riditaankii xukuumaddii Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre, isagoona sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo qabsoomid shirka magaalada Dhuusamareeb.
Habar Baa Hawhawleh Heelada Inoo Tuma,
Deni Dastuurka Qabyo Qoraalka ah ma Akhriyaa?
Haddii uu Akhriyo miyuusan fahmi karin, haddii uusan fahmi karin miyuu waayey Dad bartay Sharciga oo u fasira?
Dastuurka qabyo Qoraalka ee Soomaaliya
Qodobka 53aad,Firqadiisa 1aad wuxuu Tilmaamaya waxyaabaha ay iska kaashan karaan ama ka shiri karaan Horjoogayaasha Gobolada waana Arrimaha Bulshada sida Caafimaadka, waxbarashada, Daaqsinta IWM
Laakiin Arrimo kale oo ku saabsan masiirka ummadda Soomaaliyeed oo Heer qaran kama shiri karaan waxaana Tilmaamaya Qodobka kor ku Xasan
Su’aashu waxaay tahay yaa jebiyey Dastuurka?
Fardo Jini habartu sow tii aad hoosteeda kasoo baxday maahan, inangumeed yahow xumi. Xarmaajo qoolka eeyga lagu jiido ayuu ku jira waana ku daayay waa hadii inaba aad fahan siyaasadeed leedahay. Dani 3000 km barwaaqo ah nabad ah amison Iyo Ugandise aysan joogin ayuu ka taliyaa calan ayaa u babanaya ee Farmaajo km 4 tegi karin oo Ugandise ku musqusha geeyaan cidi wax waydiinmayso waana maxbuus xiran. Adeer dalkan dadkii u talin jiray ayaa u talin no more ilkayar iyo afarqooble.
Deni oo ku guuldaraystay maamulka Puntland,waxaa u fudud in uu eedeeyo dowlada federaalka.
Waxa la yiraahdo “ all politics are local)
Dadka Puntland ee aan helin wixii ay ka filayeen,dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya tan iyo markii ka dhisay
Bishii agoosto (August) ee 1998.
1- 5 gobol ee Puntland lago dhisay in badan waa ay ka baxeen.
2- Cadaalad daro la bilaabatay dhisdii maamulka oo hab beeleed wax logo qaybsaday oo beelo badan loo diiday in ay matalaad helaan,kuwa sadbursi ay heleen,alifkii kaa xumaada al barqra buu ku dhibaa.
3/ musumaasuq kii u waynaa waxaa sameeye Gaas iyo Deni,
waxa ay laaluush malaayeen ah ka qaateen shirkada DP World ee Imaaraadka,Waxaanna kala qayb galay musumaasuqaasi xildhibaanada la soo magacaabo ee Puntland ee xilgii Gaad iyo midkan Deni.
3- Deni Baarlamaankii Puntland wuu baabi’yey,ka danbow markii uu keensaday shaqsi la yiraahdo Abwaa oo shaabad uu Deni sito noqday.
4- intii Deni joogay amaankii waa sii xumaaday.
Garowe iyo Gaalkacyo waxa lago dilay labii gudoomiye goboleed. Bossaso shaqaaqooyin argagixiso iyo mid beeleed ba waa ka dheceen.
5- Gobolja Gaardafu ama ( Guardafoi) waxa ay sheegeen in ay kalsoonidii kala noqdeen maamulka Deni.
Deni oo intaasi iyo wax ka badan oo ku tumasho dastuurka iyo sharciga Puntland sameeyey wax wanaag ah inaba ma samayn.
Mid xisbiyada in 22 sano ay qaatato in maantay lago faano waxaano bilownay is diwaangelintii xisbiyada siyaasada waa faanoole fari kama qodna.
Puntland kuma guulaysan wixii loo dhisay waxayna u baahantahay dib u habayn cusub oo watiga la jaanqaada,
beenta iyo borobogandada ha la joojiyo oo xaqiiqda la abaaro.
Guul Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan.
Dastuur Ku Sheegii Garoowe 1 Iyo Garoowe 2 Waa La Tuuray Ee Cirka Aada,
War nimanku han xumaa… oo qarjaruufo badanaa…
Dastuurka waxaa jebiyay, marka nin ku meel gaar ah umadda Soomaaliyeed masiirkeeda wax ku saabsan ansixiyo isagoo aan awood sharci ah u lahayn. Qof hurda kasoo kacay baa u egtahay Daahir Jaamac ee bal fiiri ilaa shalay iyo doraad wax dad ka hadlay sharci daro inay tahay, layskumaba khilaafin ee adiga Hadalka Madaxweyne Deni si kuu damqayaa.
Dhulmahante waxba lagama weydiinayo arrimaha Soomaaliya.. Saaxiib kabaha utol iidoorka guska ku geliyey.. Mise waad u macaansatey in uu kugu sii jiro.
Wixii Habar Majeedheen Ah
Iyo Halamash Naagaa Leh,
Sida Loo Suuroodo Ayaad Taqaaniin,
Ciic Dii Baa Idinka Dhamaatay.
Meesha qabaa’ilka in la caayo waa dayuusnimo.
Waxaa waxa ay yihiin la timaamayaa ku dhaca iyo boobka ,ku tumashada sharciga ,baabi’yey Baarlamaankii Puntland wa Gaas iyo Deni marka yaan wax loo bedelin,waa labo dhagar wavsysal ah oo mudan in sharciga la hor geeyo.
Kuwa u hiiliya iyaba waa ka mid.
Puntland maantay atey ugo daran tahay intii ay dhisnayd re dib u habayn ku dhisan cadaalad iyo in sharcigo sareeyo vay u baahantahay iyo in rubta laga sheego wixii dib u dhac ah ee jira.
Puntland guul iyo guud ahaan.
Madaxweyne dani haduu kheyr leeyahay puntland buu kamuuqan lahaa, oo qabiilka baa laga gudbilahaa oo waayahan puntland dadka daga aad oga eed sheeganayaan.